बच्चा जन्माउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यो हो महिलाको बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर, अन्यथा… - SandeshMedia.com
बच्चा जन्माउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यो हो महिलाको बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर, अन्यथा…
२१ मंसिर २०७७, आईतवार ०३:५७
काठमाडौँ । कति फेमेली प्लानिङको तयारीमा होलान् । विवाहपछि आफ्नै कोखको बच्चा हुर्काउने रहर हुन्छ, दम्पतीलाई ।
जब गर्भ रहन्छ, मन शान्त भने हुँदैन । अनेक उथलपुथल हुन्छ । आफ्नो बच्चा कस्तो होला रु स्वस्थ्य होला कि नहोला यस्ता जिज्ञासा उठ्छ । यही जिज्ञासाले मनलाई बेचैन बनाउँछ ।
एक स्वस्थ बच्चा जन्माउनका लागि महिलाको एउटा निश्चित उमेर हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले आमा बन्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर २० देखि ३० वर्षलाई मान्ने गरिन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्दै जान्छ । यद्यपी ३५ वर्षसम्मका महिलाले राम्रोसँग बच्चा पाउन सक्ने चिकित्सकहरु बताउंछन् ।
३५ वर्ष उमेर नाघिसकेकी महिलाबाट जन्मने बच्चामा पनि डाउन्स सिन्ड्रोमजस्ता जन्मजात विकार आउने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले पनि बच्चा पाउँदा जोखिम हुने बताइएको छ । महिलाको उमेर १९ वर्षभन्दा कम छ भने सन्तान पाउनका लागि केही समय पर्खिनु नै उत्तम हुन्छ ।
पुरुषको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ढिलो बिहेले पुरुषको प्रजननशक्ति अर्थात् शुक्राणुमा कमजोरी आउँछ र यस्ता शुक्राणुमा गति पनि हुँदैन । बढी उमेरमा पुरुषको शुक्राणु बन्ने संख्यामा पनि कमी आउँछ । यसबाट गर्भ रहन समस्या हुनुका साथै कमजोर बच्चा जन्मने सम्भावना हुन्छ ।
गर्भ रहेदेखि नै केही कुरामा सर्तकता अपनाउने, सजग हुने, खानपान र दिनचर्यालाई सन्तुलित राख्ने हो भने धेरै हदसम्म ढुक्क हुन सकिन्छ ।
गर्भवतीको मनमा पैदा हुने वेचैनी, आवेग, आक्रोस, पीडा, वेदनाले समेत गर्भको बच्चालाई असर गर्छ । त्यही कारण गर्भ रहेदेखि नै महिलाले मनलाई शान्त बनाउनुपर्छ । श्रीमती जब गर्भवती हुन्छे, श्रीमान्ले आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्छ ।
खानामा हरियो सागसव्जी अण्डा दूध, फलफुल माछा मासु खानु राम्रो हुन्छ । साथै आवश्यक मात्रामा पानी समेत पिउनु राम्रो हुन्छ । गर्भअवस्थाको बेलामा जति सकिन्छ पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । नुहाउनका लागि तातो पानी प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । धूमपान र मध्यपानले गर्भवती महिलाको रगतमा हुने आइरनको नास गरिदिन्छ । आइरनको कमीले गर्दा कतिपय अवस्थामा गर्भवती महिलाहरु शारीरिक रुपमा कमजोर हुन सक्छन भने यसको असर बच्चाको विकास तथा उसको तौलमा समेत पर्नसक्छ । तनाबले चिन्तित मात्रै तुल्याउदैन कि गर्भवती अवस्थालाई जटिल बनाउने समेत गर्छ । तनावले गर्भवती महिलाको मात्रै नभई पेटमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत असर गर्छ । गर्भवती अवस्थामा महिलालाई आरामको एकदमै जरुरी हुन्छ तर त्यो संग संगै थोरै कसरतको पनि आवश्यकता पर्दछ । कसरतले गर्भवती महिलालाई चुस्त बनाउछ र दुखाई सहने क्षमता समेत बढाउछ ।
बीमाबारे तपाइँलाई यी कुरा थाहा छ ?
२८ मंसिर २०७७, आईतवार ०४:३१
किन बालबालिकामा बोलीको विकास ढिलो हुन्छ ?
२८ मंसिर २०७७, आईतवार ०४:१६